गाउँपालिका अध्यक्षको अश्लील सेल्फी भाइरल | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
बुधबार बिहानैदेखि एक जनप्रतिनिधिको सेल्फी तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। सेल्फीमा उनको अवस्था भने अश्लील छ।
यसरी तस्वीर भाइरल भएपछि अध्यक्ष ओझाले सो तस्वीर आफ्नै रहेको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘मेरा विरोधीले मलाइ सिध्याउन यस्तो गरेका हुन्।’
उनी निकै तनावमा रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो। उनले निकै अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै कुरा गरेपछि यसबारे कुरा गर्दा उनले आफू सधै‌ यस्तै भएको बताए । उनले भने, ‘मेरै पार्टीका मान्छेहरु लागेका हुन्।’ ओझा तत्कालीन एमाले हालको नेकपाबाट विजयी अध्यक्ष हुन्।
को–को लागे विरोधमा भन्ने प्रश्नमा ओझाले भने, ‘म कसैको नाम लिन चाहन्न तर, मेरै पार्टीका मान्छेहरु लागेका छन्। उनीहरुले काँग्रेसका मान्छेलाई पनि दिए (अश्लिल तस्वीर) । तर, यो तस्वीरले आफूलाई केही फरक नपार्ने उनको भनाइ छ।
उनले यो तस्वीर दुई वर्षपहिला आफु विरामी हुँदा काठमाडौंमा लिइएको दावी गरे। तर, तस्वीर उनले आफै होटलको कुनै कोठामा लिएको जस्तो देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा भने यो तस्वीर अध्यक्ष ओझाले एक युवतीलाई मोबाइलमा पठाएको चर्चा छ।
के महिलाको शरिरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ? जान्नुहोस यस्तो छ यथार्थ….
मुनाल सहकारी र चरक बिच सम्झौता